राजनीतिक चरित्रका ती चार प्रधानमन्त्री
ब्लग भैरव रिसाल
साढे दुई दशकभन्दा लामो मेरो पत्रकारिताको अनुभवका आधारमा के पाउँछु भने, पूर्णरुपमा राजनीतिक चरित्रका प्रधानमन्त्री वा सरकार प्रमुख चार जना र आधा राजनीतिक चरित्र भएका दुई जना थिए।
डा. देवेन्द्रराज पाण्डेको राजीनामा दरबारलाई चुनौती!
पञ्चायत कालको चरममा अर्थसचिव भएका डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले अकस्मात् राजीनामा दिँदा निकै खलबली मच्चिएको थियो। दरबारले प्रधानमन्त्रीको ‘जासूसी’ मा लगाएपछि राजीनामा दिएको उनले आफ्नो आत्मकथा ‘एक ज्यान दुई जुनी’मा उल्लेख गरेका छन्।
जब डा.हर्क गुरुङले चिने 'शैक्षिक सामन्तवाद' शैक्षिक सामन्तवादबारे बुझाउन मैले डा. हर्क गुरुङलाई हुम्ला भ्रमण गराएको थिएँ। त्यहाँ आयोजित कार्यक्रममा स्थानीयको गुनासो थियो, ‘जहाजले ल्याएको स्वाद र तागत नभएको बासी चामल ढुक्ने बानी लाग्यो। तिघ्रा दरो पार्ने खानेकुरा हराउँदै गए।’
डा. केआई सिंहको हात कि जुँगामा हुन्थ्यो, कि राइफलमा डा. केआई सिंहको संगतमा बिताएका क्षण सम्झँदा उनको व्यक्तित्व अनौठो थियो। विद्रोह गरेर चीन भागे। फर्केर आएपछि प्रधानमन्त्री भए। पार्टी खोले। पत्रिका चलाए। उनको व्यक्तित्व कहिले रहस्यमय र कहिले सिनेमा जस्तो लाग्ने। विलक्षण प्रतिभा थिए।
मन्त्री गणेशमान टुँडिखेल चक्कर मार्थे गणेशमानजी साँझ प्राय सदर टुँडिखेल दुइ तीन चक्कर लगाउनुहुन्थ्यो। म पनि सँगसँगै हुन्थेँ। त्यति बेला वहाँ प्रायः मन्त्रिमण्डलका निर्णय सुनाउनुहुन्थ्यो। ती भोलिपल्टका समाचारका विषय बन्थे।
भैरव रिसाल र भैरव अर्यालको एउटै चुल्हो भैरव अर्याललाई खोई के–के समस्या थियो कुन्नी? चाँडै अस्वभाविक मृत्यु रोज्नुभयो। त्यति प्रतिभाशाली मान्छेले किन त्यति चाँडै अपहत्ते गरी मर्नु पर्‍या होला भन्ने अझै लागिरहन्छ।
‘मिनी नेपाल’ थियो नयाँ सडकको पिपलबोट नयाँ सडक पिपलबोट भनेपछि सिङ्गो नेपालको प्रतिनिधित्व हुने युग थियो, एकताका। बाहिरबाट पहिलोपल्ट काठमाडौँ आउने जो कोही पिपलबोट पुग्थ्यो। त्यहाँ कोही न कोही चिनजानका मान्छे भेटिहालिन्थ्यो।
निरर्थक भाषणमा समय स्वाहा ! हाम्रा नेता र नीति निर्माताको धेरैजसो समय सभा–समारोह, भाषण र जनसम्पर्कमा बित्छ, अनि किन नहोस् त महत्वपूर्ण विकास–आयोजनाको दुर्गति ?
पश्चिम सेतीलाई अल्झाउने नातावादको त्यो पासो नेपालको विकासको गति नबग्नुमा नाता र कृपावाद पनि कारक रहेको स्मेक कम्पनीले अड्काएको पश्चिम सेती आयोजनाको नियतिले देखाउँछ।
४६ सालको आन्दोलनमा पाको पुस्ताको त्यो जोश
हरेक परिवर्तनको संघर्षमा युवाको सहभागिता र नेतृत्व महत्वपूर्ण हुन्छ। तर, पञ्चायत ढाल्न प्रौढ पुस्ताको जाज्वल्यमान योगदान भुल्न मिल्दैन।
यस्तो रहेछ किरातदेखि राणा कालसम्मको शासन-प्रशासन
लिच्छविकालमा राज्यलाई विभिन्न प्रान्तमा विभाजन गरिएको रहेछ। प्रान्त प्रमुखलाई ‘सामन्त’ भनिन्थ्यो, जसको नियुक्ति राजाले गर्ने परिपाटी रहेछ।
चर्खण्डी जात्राः ११६ वर्षपछि पनि जीवन्त परम्परा भक्तपुरको दधिकोटमा मानन्धर र श्रेष्ठहरूको संयुक्त प्रयासबाट वि. सं. १९६१ वैशाखदेखि मनाउन शुरु भएको चर्खण्डी जात्रा एक सय वर्ष नाघिसक्दा पनि अविच्छिन्न चलिरहेकै छ।
सय वर्ष अघिको अमेरिका सन् १९०५ ताकाको अमेरिकाको रुग्ण सामाजिक, आर्थिक तथ्यचित्र केलाउँदा आजका अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकमा समृद्धिको सजग सपना देख्न सकिन्छ।
बीपी र नेहरू युगको नेपाल–भारत सम्बन्ध सन् १९५९ मा भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूले ‘नेपाल र भुटानमाथि कतैबाट आक्रमण भए त्यसलाई भारतले आफूमाथिको आक्रमणको रूपमा लिने’ बताएपछि बीपी कोइरालाले अन्य देशको हस्तक्षेप सह्य नहुने भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए।
शौचालय अभियान चलाउँदाका ती हैरानी आजभन्दा चार दशक अघि काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका विभिन्न जिल्लामा शौचालय निर्माण अभियान लिएर जाँदा स्थानीयलाई सम्झाइबुझाइ गर्न धेरै जोडबल गर्नुपरेको थियो।